လူမီနီယံလျှောတံခါး & ပြတင်းပေါက်
လူမီနီယမ်လျှောတံခါးကို&ပြတင်းပေါက် Changyuan လူမီနီယံအလွိုင်းလျှောတံခါးကို&ပြတင်းပေါက်များကိုအလူမီနီယမ်အလွိုင်းအဆောက်အအုံ profile များဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်. ၎င်းတို့ကိုသာမာန်လူမီနီယံအလွိုင်းတံခါးများနှင့်ပြတင်းပေါက်များနှင့်ကျိုးပဲ့နေသောတံတားလူမီနီယမ်အလွိုင်းတံခါးများနှင့်ပြတင်းပေါက်များအဖြစ်ခွဲထားသည်. လူမီနီယမ်အလွိုင်းပြတင်းပေါက်များလှပသောဖြစ်ကြသည်, တံဆိပ်ခတ်သည်, နှင့်အစွမ်းသတ္တိကိုမြင့်. သူတို့က…
လူမီနီယံအပူအပူချိုးတံခါးကို & ပြတင်းပေါက်
လူမီနီယမ်အပူတံခါးကိုချိုး&window လူမီနီယံအပူချိုးချိုးခြင်းတံခါးများနှင့်ပြတင်းပေါက်များသည်တံခါးတစ်မျိုးဖြစ်သည် & တံတားတပ်ဆင်ထားသောတံတားလူမီနီယံ profile များကိုနှင့် insulator တွင်လည်းဖန်ကိုအသုံးပြုသောပြတင်းပေါက်, အရာစွမ်းအင်ချွေတာ၏လုပ်ဆောင်ချက်များကိုရှိသည်, အသံ insulator တွင်လည်း, ဆူညံသံကာကွယ်ခြင်း, ဖုန်မှုန့်နှင့်ရေစိုခံ. ကျိုးပဲ့တံတားအလူမီနီယံတံခါးများ၏အပူစီးကူးကိန်းနှင့်…
လူမီနီယံရှပ်တံခါးနှင့်ပြတင်းပေါက်နှင့် roller ရှပ်
လူမီနီယံရှပ်တံခါးကို&window / roller shutter Changyuan အလူမီနီယမ်အလွိုင်းအပေါက်တံခါးနှင့်ပြတင်းပေါက်များကိုကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသောကုလားကာများဖြင့်ချည်ထားသည့်ပုံစံဖြစ်သည်. အလူမီနီယမ်အလွိုင်းအကာအရံများသည်အဓိကအားဖြင့်သံချေးမသွားသောလူမီနီယမ်သတ္တုစပ်များဖြင့်ပြုလုပ်သည်. ပေါ့ပါးပြီးကြာရှည်ခံသည်. ရှပ်တာများသည်ပျော့ပျောင်းသောအလှဆင်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။